Naseho Teo Anatrehan’ny Fitsarana Tampony ao Maoritania Ilay Bilaogera Efa Nomelohina Ho Faty Tamin’ny Voalohany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Janoary 2017 4:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Ελληνικά, Français, Swahili, English
Amin'ny 31 Janoary no fantatra fa hamoaka ny fanapahan-kevitra momba ny raharaha mahakasika ilay bilaogera Mohamed Ould Cheikh Mkhaitir, izay voaheloka ho faty tamin'ny taona 2014 noho ny fanehoan-kevitra tao amin'ny lahatsoratra izay nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny gazety Aqlame ny Fitsarana Tampony ao Maoritania .
Tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Fivavahana, Mahampivavaka ary Mpanao Asatanana”, izay efa nofafan'ny Aqlame kanefa mbola azo jerena an-tserasera ihany, nitsikera ny fampiasana ny fivavahana mba hanamarinana ny rafitra fanavakavahana saranga ao Maoritania i Ould Mkhaitir sady nitanisa ireo ohatra avy amin'ny androm-piainan'ny mpaminany Muhammad.
Nosamborin'ny manampahefana Maoritaniana i Ould Mkhaitir tamin'ny 2 Janoary 2014, roa andro taorian'ny lahatsoratra navoakany, ary tamin'ny Desambra 2014 nanameloka azy ho faty noho ny “fivadiham-pinoana” teo ambanin'ny andininy faha-306 amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Maoritaniana amin'ny fanaovana “tsinontsinona” ny mpaminany ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Nouadhibou. Tamin'ny Aprily 2016, nanamafy ny didim-pitsarana ho azy ny Fitsarana Ambony, ary nanolotra ny raharahany teo anoloan'ny Fitsarana Tampony, izay manana ny fahefana hampihenana ny fanamelohana azy ho faty ho fanasaziana am-ponja miaraka amin'ny fandoavana onitra, raha hitany fa “nibebaka” ilay voampanga .
Milaza ny andininy faha-306 fa “ny Miozolomana rehetra meloka amin'ny heloka bevavan'ny fivadiham-pinoana, na amin'ny teny, na amin'ny asa miharihary na miseho mazava, dia asaina mibebaka ao anatin'ny telo andro. Hohelohina ho faty ilay voampanga raha tsy mibebaka ao anatin'io fotoana io, ary alain'ny governemanta ny fananany rehetra.” Milaza ihany koa io andininy io fa afaka manalefaka ny fanamelohana ho faty ho fanasaziana am-ponja eo anelanelan'ny telo volana sy roa taona, ary lamandy UM 5000 ka hatramin'ny 60000 UM (14$ hatramin'ny $ 170 $ Amerikana eo ho eo ) ny Fitsarana Tampony Maoritaniana raha ” mibebaka ” alohan'ny famonoana azy ilay olona voaheloka.
Taorian'ny fisamborana azy, namoaka fanambarana avy any am-ponja i Ould Mkhaitir nilazany fa tsy nanam-pikasana ny haniratsira ny mpaminany izy, ary miampanga ireo mpitsikera azy ho “mivoy fihetseham-po ara-pivavahana” mba hikendrena azy. Efa nibebaka i Ould Mkhaitir, kanefa mbola anjaran'ny Fitsarana Tampony no mamantatra na ampy na tsia ny fibebahany.
FANAVAOZAM-BAOVAO [1 Febroary 2017]: Tsy nahavita nanova ny didy famonoana ho faty an'i Ould Mkahitir ny Fitsarana Tampony ao Maoritania. Naverin'ny fitsarana tany amin'ny fitsarana ambony ny raharaha satria nolazainy fa nisy fombafomba ara-pitsarana tsy nety. Vao nanamafy ny didy famonoana ho faty sy ny fiampangana azy ho “nivadi-pinoana” ny Fitsarana Ambony. Tany amin'ny didy navoakan'ny fitsarana ambaratonga voalohany, nampangaina ho “nihatsaravelatsihy” i Ould Mkahitir, izay manondro fa tsy tena vokatry ny fony ny fibebahana nataony noho ny fivadiham-pinoana.
‘Toerana farany mbola matanjaka ny fanandevozana’
Mbola mijanona ho fady ao Maoritania ny fanakianana ny rafitra ara-poko, firenena izay nofaritana ho “toerana farany mbola matanjaka ny fanandevozana.” I Maoritania no firenena nanafoana farany eto amin'izao tontolo izao ny fanandevozana tamin'ny taona 1981, ary mampiditra ho heloka ilay fomba fanao vao tamin'ny taona 2007. Na dia teo aza izany, naminavina ny isan'ny olona miaina ao anatin'ny fanandevozana ao Maoritania ho eo anelanelan'ny 340.000 ka hatramin'ny 680.000 ny Firenena Mikambana, izay manome ny 10 hatramin'ny 20% amin'ny isan'ny mponina. “Ambany dia ambany” ny isan'ny fanenjehana iadiana amin'ny fanandevozana, araka ny tatitra tamin'ny taona 2014 avy amin'ny Iraka Manokan'ny Firenena Mikambana momba ny endrika fanandevozana ankehitriny, raha entina eny amin'ny fitsarana ady heloka bevava ireo izay manao fanentanana hanohitra ny fanandevozana
Tamin'ny taona 2014, mpikatroka maro tamin'ny sehatra iray manohitra ny fanandevozana sy manohitra ny fanavakavahana no nosamborina ary notsaraina noho ny fanentanana miady amin'ny fanandevozana anisan'izany i Biram Dah Abeid izay nilatsaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny taona 2014 tao Maoritania. Voaheloka ho faty tamin'ny fiampangana “fivadiham-pinoana” noho ny hetsi-panoherana manohitra ny fanandevozana toa an'i Ould Mkhaitir, tamin'ny taona 2014, i Dah Abeid tamin'ny taona 2012, izay nahitana azy nandoro ny andinin-teny ara-pivavahana manamarina ilay fomba fanao nosoratan'ny manam-pahaizana silamo tamin'ny taonjato faha-8, ary nanome kabary miampanga ireo izay mampiasa ny fivavahana hanamarinana ny fanandevozana sy ny fanavakavahana:
Misy vondron'olona ratsy fanahy izay mitazona ny finoana silamo sy mampiasa azy io amin'izay tiany, ary mampizarazara ny fiarahamonina io vondrona io , mametraka ny olona sasany ho ambony, ary ny olona sasany ho ambany ,tsy noho ny zavatra ataony na hoe iza izy ireo fa noho ny volonkoditra .
Noafahana madiodio i Dah Abeid tatỳ aoriana. Kanefa voaheloka roa taona an-tranomaizina noho ny fikatrohana manohitra ny fanandevozana izy tamin'ny taona 2015.
Any amin'ny firenena maro manerana ny faritra Arabo, anisan'izany i Arabia Saodita, ny Emirà Arabo Mitambatra, Qatar, sy Yemen, heloka bevava iharan'ny sazy fanamelohana ho faty ny “fivadiham-pinoana”. Matetika no ampiasaina “hahazoan'isa amin'ny paika politika na hanenjehana ireo ankahalaina manokana ” ny fiampangana fivadiham-pinoana sy ny fitenenan-dratsy, araka ny nosoratan'i Brian Whitaker, mpanao gazety, mpanoratra ny boky Ny Arabo Tsy Misy Andriamanitra , tamin'ny raharaha mikasika an'i Ould Mkahitir raha iverenana ny taona 2014.